Iiarhente zokuHamba zaseIndiya kunye neBhodi yezoKhenketho yaseNepal ngoku Joyina izandla
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » Iiarhente zokuHamba zaseIndiya kunye neBhodi yezoKhenketho yaseNepal ngoku Joyina izandla
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • Iindaba zeNepal Breaking • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel
I-Indiya ne-Nepal zidibanisa imikhosi
UMbutho wee-Arhente zoKhenketho waseIndiya (TAAI) utyikitye iSivumelwano sokuQeqesha (MOU) ngo-Okthobha wama-22, 2021, neBhodi yezoKhenketho yaseNepal ukukhuthaza nokomeleza ukhenketho lwamazwe amabini.
I-MOU igxile ekukhuthazeni imidla efanayo kunye nokufika kwabakhenkethi ngokusebenzisana kunye nendlela yentsebenziswano ngokuhambelanayo.
UJyoti Mayal, uMongameli, i-TAAI, uthe bagxile ekukhuthazeni imveliso yokhenketho ebandakanya uncedo lwamazwe amabini ekukhuthazeni ukhenketho.
Oku kuya kufezekiswa ngemisitho, imiboniso yendlela, iingqungquthela, iingqungquthela, iiwebinars, njl. njl., ukubonisa amandla okhenketho lwamazwe omabini.
UJyoti Mayal udlulise kwaye wakhetha ukuba iIndiya kunye Nephal ukwabelana ngemida kwaye, ke ngoko, omabini la mazwe kufuneka aphuhlise ukhenketho ngakumbi, ngakumbi emva kobhubhane. Zombini kufuneka zibe nobuchule ngakumbi kwaye zamkele izithethe ezintsha kunye nezicwangciso zokuthengisa. Ukhenketho kula mazwe mabini lunokubona ukukhula okubonakalayo kwaye ekugqibeleni lunokuba yimarike yomthombo wokuqala.
U-Anoop Kanuga, iLungu leKomiti eLawulayo, TAAI, wabonisa ukubonga kwakhe waza wabulela uDkt Dhananjay Regmi, i-CEO, iBhodi ye-Nepal yezoKhenketho (NTB), kunye neqela layo lonke ngenkxaso kunye nentsebenziswano eyandisiweyo kwi-TAAI. Ugxininise ubudlelwane obudala kunye ne-Indiya kunye neNepal kunye nokuba i-TAAI ibe negalelo njani ekuqiniseni nasekuqiniseni okufanayo ngokuququzelela ukuhamba kunye norhwebo phakathi kwezizwe ezimbini.
Imisitho ethile inokuqukwa phantsi kwale MOU, kwaye omabini amaqela asekelwe kwiingxoxo kunye neengxoxo ziya kuqulunqa izicwangciso-qhinga zokukhuthaza nokuphucula ukhenketho lwamazwe amabini, utshilo uJay Bhatia, uSekela Mongameli.
UBettaiah Lokesh, uNobhala Jikelele oHloniphekileyo, ugxininise imfuno yokuququzelela izimemo ezihambelanayo kwimisitho yonyaka yabanye kuquka iinkomfa, iimathesi zokuhamba, kunye neminye imisitho ye-ad-hoc yesizwe neyengingqi, kwaye wabulela i-NTB ngokuvuma ukubandakanya isiphakamiso kwi-MOU.
Utshintshiselwano ngolwazi, oludlala indima ebalulekileyo kuphuhliso lobuchule bokuphuhlisa ukhenketho ngokusingise kuphuhliso lweziseko ezingundoqo, uhlalutyo, kunye nezinye iinkcukacha, njl. njl., ngenene linqaku elikhethekileyo elongeziweyo kwiMOU utshilo uShreeram Patel, uNondyebo oHloniphekileyo.